News Mansarovar » आज नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक, बैठकमा आउलान् ओली ? आज नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक, बैठकमा आउलान् ओली ? – News Mansarovar
आज नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक, बैठकमा आउलान् ओली ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनेरनहुने यकिन नभएको उनको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
ओली नआएको खण्डमा बैठक अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालको समूहले पनि ठोस मनस्थिति बनाइसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने शीर्ष तहमा सहमति गरेर मात्र बैठक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शनिबार प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका ओलीले पनि दुवै नेताको आरोपपत्रको बारेमा सहमति कायम गरेर मात्र बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए ।
तर प्रचण्डले भने पार्टीमा जति विवाद छन्, सबै विषयमा स्थायी कमिटीले नै निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए । शनिबार दाहाललाई भने ओलीले बैठकमा आफू नआउने जवाफ दिएका थिए ।
अब नेकपा बैठक विस्तारै निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गराउने दाहाल-नेपाल समूहको तयारी छ । अहिले संसद अधिवेशन नचलेका कारण अहिले नै कुनै कदम चाल्दा ओलीले त्यसको काउन्टरमा नयाँ अध्यादेश जारी गर्ने भएकाले दाहाल-नेपाल समूह संसदसम्म कुर्ने पक्षमा छन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार अबको दुई हप्तामा सरकारले जसरी पनि संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन बोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी तथा अन्य अध्यादेश ल्याउन पाउने छैनन् ।
अहिलेसम्म स्थायी समितिको बैठक लम्ब्याउने दाहाल र ओली समूहकै रणनीति थियो । अब विवाद निर्णायक मोडतिर गएको संकेत दाहालले केही दिन अगाडि प्रदेश नं. १ को भेलामा पनि दिएका थिए ।
निर्णायक कदमका लागि नै कार्यकर्तालाई मानसिक रुपमा तयार गराउन दाहाल-नेपाल समूहले कार्यकर्ता भेला गरिरहेका छन् । दाहाल-नेपाल समूहले निर्णायक कदमको तयारी गरिरहँदा ओलीले भने केही नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । यस अगाडिझैं उनले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तर यो संवैधानिक रुपमा सहज विषय होइन । अहिले संसदमा नेकपामा दुई तिहाइ नभएका कारण संविधान संशोधन गरेर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था खोल्न सक्ने अवस्था छैन् ।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको समूहमा अब एक पद छोड्नै पर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निस्कन थालेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री कुन पद छाड्ने भन्ने बहस जारी छ ।